Ụbọchị Mba Ndị Dị n'Otu: Oge ime ememme na ịsa ụlọ ọcha
24/7 eTV BreakingNews Show : Pịa na bọtịnụ olu (aka ekpe ala ihuenyo vidiyo)
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ụbọchị Mba Ndị Dị n'Otu: Oge ime ememme na ịsa ụlọ ọcha
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
Taa bụ United Nations Day, ụbọchị dị mkpa icheta ụwa nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ.
N'ụbọchị a, United Nations kwesịkwara ịmepụta usoro nke nwere ike idozi nrụrụ aka, nrụrụ aka, na adịghị arụ ọrụ n'ime mgbidi nke ya.
Network Tourism Network nwere ihe ncheta enyi na enyi.
Bọchị United Nations na Sọnde, Ọktoba 24 bụ ụbọchị ncheta ụbọchị na 1945 mgbe Ngalaba nke United Nations banyere ike.
Ụbọchị UN, nke a na-eme kwa afọ, na-enye ohere ịkwalite anyị nkịtị burukwa ma kwukwaa ebumnuche na ụkpụrụ nke UN Charter nke duziri anyị kemgbe afọ 76 gara aga.
Ka ụwa na-amalite nke nta nke nta iji gbakee site na ọrịa Covid-19, ka anyị mee ka oku ahụ sikwuo ike imekọ ihe ọnụ mba ụwa na ọdịmma nke mba na ndị mmadụ, na-ewughachi ọnụ maka udo na ọganihu. UN malitere n'ihu ọha na 24 October 1945 , mgbe China, France, Soviet Union, United Kingdom, United States na ọtụtụ ndị bịanyere aka n'akwụkwọ kwadoro Charter ahụ.
Alain St.Ange, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa na-achọ Africa na gafee obi ụtọ United Nations Day 2021.
UN na Africa
Ụbọchị Mba Ndị Dị n'Otu nke a na-eme n'October 24 bụ nnukwu ohere nye anyị niile ịtụgharị uche n'ihe kpatara e ji mepụta nzukọ a kamakwa iji nyochaa mkpa ọ dị ịrụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma nke ndụ anyị, maka nlanarị obodo anyị, na nke ụwa. nche.
Dị ka anyị ghọtara na ọ bụ mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị ka ụwa ghọtara na ọ dị mkpa ime ka mba dị iche iche pụọ n'ụdị agha ọ bụla nke e hiwere United Nations (UN) na 1945 iji gbochie agha ndị na-emebi emebi n'ọdịnihu. Ọktọba 24 ga-eme ka anyị ghọta uru nke obi ụtọ, udo, nchekwa, na ụwa ka mma ugbu a ka Africa na Community of Nations na-alụ ọgụ ọgụ nke mwakpo ike na ndụ anyị site na oria ojoo nke Covid-19.
"Afrịka chọrọ ka ụmụ ya nwoke na ụmụ nwanyị niile nọrọ ọnụ taa karịa ka ọ dị na mbụ, ma ọ bụrụ na anyị ga-esi ike karịa ka ọ dị na mbụ mgbe ọrịa a gasịrị. Ka anyị niile tinye onwe anyị iji megharịa ụlọ ọrụ njem anyị maka ọdịmma ndị obodo anyị na obodo anyị” Alain St.Ange kwuru.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka na-eji ụbọchị UN, Ọktoba 24 nke 2021, kwughachi nkwa ya ịrụ ọrụ maka njem nlegharị anya maka obodo ọ bụla nke mpaghara Africa.
Alain St. Ange & Juergen Steinmetz (l)
Network Tourism Network chọrọ ka UN hichaa ụlọ
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa kwughachiri okwu onye isi ATB mana gbakwunyere nchegbu siri ike:
Enwere m olile anya na United Nations n'ụbọchị a pụrụ iche ga-eleba anya n'ọrụ nke ụlọ ọrụ pụrụ iche nke ya, World Tourism Organisation (UNWTO), ma ghara inwe nchegbu maka ịkwaga isi ụlọ ọrụ, mana ọ na-echegbu onwe ya ka ụlọ ọrụ a si ada n'ịdu njem njem site na Nsogbu COVID-19.
Ọ na-achọ ọchịchị dị irè, nke na-enweghị esemokwu na nke eziokwu, karịsịa n'oge nsogbu.
UN emezughị ma ọ bụ kweta na ọ bụ okwu dị mkpa n'ime ya (UNWTO) mere ka ọ mara, ọ ga -enwerịrị ụlọ dị ọcha ka ọ bụrụ nkwenye, dị mkpa ma dị irè maka nde mmadụ na -arụ ọrụ, mba dabere na njem njem na njem njem ụwa.
Nke a kwesịrị ịdị na-amasị mba niile so na ndị ọzọ.
UN ga-eguzobe usoro mkpesa na ogwe aka nkwukọrịta iji gboo mkpagbu ndị dị otú ahụ. "
Onye bụbu onye isi GE aha ya bụ CEO nke Unical Aviation
Adịla njikere ịme oriri ọzọ: ire ahịa Champagne na -edobe ihe ọhụrụ ...
St. Kitts Ugbu a nwere ihe mere e ji eme ememe Cruising
Ị nọ na ndepụta egwu: China na-eyi Taiwan egwu ...
Njem nlegharị anya Jamaica na-enwe mkparịta ụka itinye ego n'ụgbọ mmiri dị mkpa
Kedu onye kachasị ike na nkwalite...
Seychelles nabatara Green Green Travel Ugbu a si Italy
Swoop malitere ụgbọ elu ọhụrụ na Palm Springs site na...
Russia kwụsịrị mmachi na Austria, Switzerland…
Iweghachite ahịa ụlọ nkwari akụ: Lee Germany, Spain na ...
Ịgba ọgwụ mgbochi COVID maka ụmụaka ngwa ngwa Kwuo ndị dọkịta ER
Ụgbọ elu Condor amaliteghachila ụgbọ elu ya na agwaetiti Paradise ...
India na-eme nnwale COVID-19, ịpụ iche maka ...
Gaa na USA: Kpọmkwem ntinye ọhụrụ chọrọ maka United...
Spa abụọ US na Top 10 Kachasị Instagrammable Spas na ...
Air India: N'ikpeazụ na -aga?
Ụgbọ elu Avianca na-ahụ ụbọchị ọhụrụ: nzọụkwụ si na ...
Ụgbọ elu Johannesburg na-aga Lagos na South African Airways...
Mgbakasị dị egwu na ebubo ọdụ ụgbọ elu ga -akwụsị ikuku ...
Ụlọ nkwari akụ Dunchurch Park na -emechi n'otu abalị: Enweghị ekwentị ...
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai na Amsterdam ...
IATA: Ọchịchọ ihu igwe nke ụgbọ elu na-egosipụta netwọkụ ụgbọ elu…
Ịdọ aka ná ntị ọrịa cancer: Ọkụ obi nwere ike ịdị ize ndụ
Costa Rica Minister of Tourism Giant Step for a New ...
Air Canada ewepụtala atụmatụ maka nloghachi nke ọma…
China Eastern ụgbọ elu ga -anabata IATA AGM 2022 na…
Kedu otu esi aga na Cambodia ọzọ?
Ebe kacha mma isi obodo zuru ụwa ọnụ maka US...
Ihe nrite K-Pop nke mbụ Indonesia Ugbu a na-egwugharị ndụ
Onye isi oche nke African Tourism Board na Ghana ga...
Ezinụlọ ndị mba ọzọ bi na Russia nwere ike ịbanye ...
YouTube na-agbasawanye mmachibido iwu ya na ọdịnaya mgbochi mgbochi niile
EU gbara ume ka ọ kwụsị mmebi nke ndị ọrụ Alitalia ...
Ngwa ngwa ngwa nke ikuku dijitalụ njem ikuku ...
Seychelles na-eweta anwụ na nrọ nke mgbapụ obi ụtọ…
Holland America Line alọghachila azụmaahịa
Ndị isi Nauru na Palau bịanyere aka na ASA,…
Ntuziaka CDC ọhụrụ maka ndị America na Omicron Covid…
Ọrịa kansa na nyocha COVID: Ọrụ nke Cytokines
More ụgbọ elu Grenada si USA na Canada ugbu a
Uggbọ elu ụgbọ elu Uganda ọhụrụ na -aga Dubai zuru oke…
Ngwa nkwalite mmekọ nwoke na nwanyị na -enweghị ikike jidere na ...
Ebe Mekong onye mmekọ mmalite ọhụrụ nke Glasgow…
Ndụ abalị n'ụwa niile na -eji nwayọ alaghachi azụ
Obodo njem kpakpando ise dị ọnụ ala na ọnụ ala na US
Kedu ihe ịchọrọ ịma gbasara ịkwaga Dubai
Universal Beijing Resort mepere ọha taa
A gwara ụmụ amaala Britain na America ka ha zere Kabul ...
Alakụba ndị Thailand na -anabata ndị na -efe ofufe ọzọ
Ụgbọ elu Calgary ọhụrụ na London Heathrow na WestJet ugbu a
NASA na-achọ ndị isi ụgbọ elu maka ọrụ ụgbọ elu mmadụ ọhụrụ December 3, 2021
Ndị na-eme ntuli aka onye isi ụgbọ elu ga-abụrịrị ụmụ amaala US nwere nzere bachelọ site na ụlọ ọrụ enwetara ikike na injinia, sayensị bayoloji, sayensị anụ ahụ, sayensị kọmputa, ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ.
Ebe kacha mma n'ụwa ịzụta ebe ezumike ọhụrụ December 3, 2021
Dị ka isi obodo Veneto nke ugwu Ịtali, a na-akpọ Venice aha mbụ ebe ezumike n'ụwa.
Beijing: Iwu ọhụrụ ga-eme ka njem azụmahịa US-China dị mfe December 3, 2021
Beijing ga-egbutu oge achọrọ iji kwado njem maka ndị isi US ruo otu izu na ọkara ma 'ga-akpachara anya' na mkpesa sitere n'aka ndị isi azụmaahịa maka usoro njem ugbu a.
Nwunye obi ụtọ: Australia bụ obodo ọhụrụ kacha aṅụbiga mmanya ókè December 3, 2021
Nyocha zuru ụwa ọnụ nke ọgwụ ọjọọ 2021 kọwara ịṅụbiga mmanya ókè dị ka ọnọdụ ebe ike anụ ahụ na nke uche na-emebi emebi ruo n'ókè na emetụta nguzozi, nlebara anya na okwu.
Mmiri ọṅụṅụ na-egbu egbu na Hawaii: Ndị ọbịa na Oahu nwere ike izu ike! December 3, 2021
Hawaii nwere ụfọdụ n'ime ndị kasị ọcha na kasị mma mgbawa mmiri ọṅụṅụ na ụwa Nke a Otú ọ dị dị nnọọ iche na Red Hill, a Navy facility na Island of Oahu, na nwere ike ịbụ nanị n'ọnụ nke iceberg.
Ịmegharị njem nlegharị anya maka ọdịnihu na ụwa: UNWTO Task Force Saudi Style ọhụrụ December 3, 2021
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO gbalịrị ịkwụsị ya taa, mana UNWTO General Assembly mere mkpebi dị mkpa na-atụgharị na tebụl mgbe ha na-eguzobe otu ndị ọrụ nọọrọ onwe ha iji chegharịa njem nlegharị anya maka Ọdịnihu.
Ndị njem nlegharị anya Africa: Njem nlegharị anya na-enweghị ihe mgbochi ugbu a! December 3, 2021
Obodo isii so na East African Community (EAC) mere Expo Regional Tourism Expo (EARTE) na Tanzania n'ọnwa Ọktoba nke afọ a. Mba ndị mmekọ ga-akwado mmemme njem nlegharị anya mpaghara a n'usoro ntụgharị site n'afọ ọzọ.
Achọpụtala ikpe Hawaii Omicron Ugbu a December 3, 2021
Otu onye nọ na Hawaii nke nweburu COVID-19 nwalere ihe dị mma maka ụdị Omicron. Ọ dịghị mgbe a gbara onye a ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ nweghịkwa akụkọ ihe mere eme njem.
IATA: A na-achọ ibu ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ 9.4% na Ọktọba December 3, 2021
Ọnọdụ akụ na ụba na-aga n'ihu na-akwado ibu ibu ikuku mana ọ dị ntakịrị ike karịa ka ọnwa ndị gara aga.
Ọnụọgụ mba nke ụdị Omicron ọhụrụ na-eto eto December 2, 2021
N'ime ụjọ zuru ụwa ọnụ nke Omicron kpalitere, ọtụtụ mba weghachiri mmachi njem na mbọ iji gbochie mgbasa ya.
Onye isi ala WTN Alain St.Ange na nkwado oke osimiri na ASEAN December 2, 2021
Alain St.Ange ga-ekwu okwu "Ocean Sustainability na ASEAN" n'oge emume nke ASEAN Day na Dubai Expo 2020.
Otu mmasị WTN ọhụrụ na chọrọ njem mba ụwa, ọgwụ mgbochi, ule December 2, 2021
Ndị otu World Tourism Network tụlere ụnyaahụ ka ha ga-esi meghachi omume na ọnọdụ na-apụta na nje Omicron ọhụrụ, na ịkwanye maka amụma na mgbanwe ga-arụ ọrụ.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica kpọrọ onye nnọchi anya GITT ọhụrụ December 2, 2021
Minista njem nlegharị anya Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (nke a na-ahụ n'ụzọ ziri ezi na foto) na-enweta onyinye nturu ugo gọọmentị ya na Institutional Travel and Tourism (GITT) Onye isi oche na onye isi oche nke Tourism Optimizer Platform, Diego Fuentes Díaz, onye chọpụtara ma kọwaa GITT dị ka echiche ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
Ụgbọ elu Ukraine na Tel Aviv na ụgbọ elu Ukraine International ugbu a December 2, 2021
Ndị ụgbọ elu Ukraine International na-adụ ọdụ ka ha nyochaa nke ọma na mmelite nke iwu na mgbochi ọrịa nke mba na-aga.
Ecuador na Galápagos Islands na-ekwupụta ọkwa ntinye ọhụrụ chọrọ December 2, 2021
Ecuador bụ otu n'ime ebe ole na ole gburugburu ụwa ebe ụmụ amaala US nwere ike ime njem ugbu a na-enweghị ikewapụ iche.